Ukusetyenziswa - Umatshini weChangzhou Hechang Co, Ltd.
Ishishini lezixhobo zasekhaya:
Ngokweemeko zangoku zemveliso yokusetyenziswa kwecandelo lezixhobo zasekhaya, siphehlelele uthotho olutsha lweengcingo ezincinci nezimfutshane, ukuthengiswa kwetin-single, crimping-single, ukujija kumacala omabini, ukuthengisa iitin kumacala omabini, umatshini ojijekileyo kwiziphelo zombini. kunye nomatshini wokukrola kumacala amabini, osombulula ngokupheleleyo iingxaki zentambo yokufaka izixhobo kwizixhobo.
ICandelo leMithombo eNtsha yaMandla:
Ngophuhliso lweshishini lamandla amatsha, u-Hechang wasungula uthotho ngokuhambelana neempawu zokucoca zamandla amatsha:: Siqulunqe umatshini omkhulu wokusika kunye nowokuvula izixhobo (≤120 mm2), umatshini omkhulu wokucoca amazinyo (≤40 Ton) kumatshini imoto entsha yamandla; oomatshini abazenzekelayo bokugcina isiphelo sendlela (umatshini wokugcina isiphelo) ukuqhawuka kwifowuni ye-voltaic wire (≤5 mm2).
IBhokisi yeMeter, Series yeKhabhinethi:
Umatshini ojija ngokuzenzekelayo umgca we-pallial kunye ne-tube, unokwenza ukusika kocingo lwesibini, ukukhupha, ukumakisha, umgca we-pallial kunye ne-tube crimping.
I-Aerospace Fibre Coaxial Cable Series:
Isicelo kumzi mveliso we-aerospace, ukubonelela ngesisombululo semigca ye-fiber coaxial, njl. Njl
Iimoto, isithuthuthu, uthotho lwemoto zombane:
Ngokusekwe kwinkqubo yokulawula ukuveliswa kwenqanaba lenkqubo yezixhobo zokuhambisa iintambo zombane, ukubonelela ngolawulo olupheleleyo lwenkqubo yonke ukusuka kulwandiso ukuya kwimveliso.Ukuthengiswa kwezinto ezibonakalayo ze-AGV kunye neziko lolawulo lwenethiwekhi yePC, ukwakha umzi-mveliso ogqibeleleyo wokulawula imveliso yolawulo, ukuqinisekiswa kwezinto, Ukuhanjiswa kwemveliso, amanani emveliso, ukulawulwa kwenkqubo, ukulandelwa komgangatho njl.njl.
Intambo kunye nentambo yokuqaqa, ukusika, ukuqhawuka kunye nezinye iingxaki zokubambisa: intambo yamandla